သင်မသိသေးတဲ့ ဂျပန်အကြောင်း !!! - JAPO Japanese News
ဂါ 08 Sep 2020, 16:08 ညနေ
ကဲ ကျွန်တော်တို့ မသိသေးတဲ့ အချို့အချက်တွေထဲက အချက်(၂၀)ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ဂျပန် ကို ဂျပန်လို “Nihon” နိဟွန်း သို့မဟုတ် “Nippon” နိပွန်း လို့ခေါ်ပြီး ကျွန်းပေါင်း ၆၈၅၂ ကျွန်းနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နှစ်ကို ငလျင်လှုပ်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်က ၁၅၀၀ လောက်ရှိပြီး ဂျပန်ရဲ့ တည်နေရာဟာ Ring of Fire ထဲမှာပါဝင်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။
၃။ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ရထားတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချိန်မှန်ဆုံးရထားတွေဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှနောက်ကျတဲ့အချိန်က ၁၈စက္ကန့်သာရှိပါတယ်။
၄။ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ကလေးငယ်အရေအတွက်ထက် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အရေအတွက်က ပိုများပါတယ်။
၅။ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ အယောက် ၅သောင်းနဲ့အထက် လူဦးရေဟာ အသက်၁၀၀ကျော်ပြီဖြစ်ပြီး ၂၁%သော ဂျပန်ရဲ့ လူဦးရေဟာ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ကလေး diapers ထက် လူကြီး diapers က ပိုပြီး ရောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလလည်း ရှိပါတယ်။
၇။ ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာ ဒီလိုစက်ပေါင်း ၅.၅၂ မီလီယံရှိတယ်တဲ့။
၈။ အချို့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ အလုပ်ချိန်အတွင်း အလုပ်ပင်ပန်းတဲ့အခါမျိုးမှာ ပေးအိပ်တယ်တဲ့။
၉။ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ ဖုန်းအများစုဟာ ရေစိုခံဖုန်းတွေဖြစ်တယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာ ရေချိုးရင်းနဲ့တောင် ဖုန်းကို အသုံးပြုကြလို့ပါတဲ့။
၁၀။ အသက်၁၅နှစ်နဲ့အထက် အားလုံးနီးပါးဟာ ဂျပန်စာကို ရေးတတ်ဖတ်တတ်ကြတယ်။ ၉၉%လောက်ပေါ့။
၁၁။ ဂျပန်မှာ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ ၁၈ နေရာ ရှိပါတယ်။
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ၁၄ နေရာနှင့် သဘာဝအမွေအနှစ်နေရာ ၄ နေရာရှိပါတယ်။
ဒီနေရာကတော့ ဂျပန်ရဲ့ ယူနက်စကိုအသိအမှတ်ပြု ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သော Gifu ရှိ Shirakawa-gōနှင့် Gokayama တို့ရဲ့ သမိုင်းဝင်ကျေးရွာများဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဆုကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
၁၂။ ဂျပန်မှာတော့ သွေးအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘာသွေးလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်ရာသီခွင်လဲဆိုပြီး မေးတာလိုမျိုးပေါ့။
၁၃။ ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအကြာဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Kango Gumi ကတော့ သမိုင်းကြောင်း ရာစုနှစ် ၁၄ ခုရှိခဲ့ပြီး ၅၇၈ မှ ၂၀၀၆ အထိဂျပန်နိုင်ငံ၊ အိုဆာကာမြို့တွင်တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Kongo Gumi ရဲ့ ၂၀ ရာစုအစောပိုင်း ၀န်ထမ်းများဖြစ်ပါတယ်။Kongo Gumi Co. , Ltd. ဟာ ဗိမ္မာန်တော်အဆောက်အ ဦး များကိုအထူးပြုဆောက်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီကို ၅၇၈ခုနှစ် မှစတင်ခဲ့ရာ မျိုးဆက် ၄၀ဆက် အကြာ ဆက်ခံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ သီးနှံများကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့ လယ်သမားများအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးများကိုလျှော့ချရန် ဂျပန်မှာ စတုရန်းဖရဲသီးများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့။
၁၅။ ဂျပန်မှာ ဂျပန်ဘာသာကိုပဲ အရေးအသား ၃မျိုးရှိပါတယ်။
Hiragana၊ katakana၊ kanji ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
၁၆။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်စျေးသက်သာသောအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကို မမျှော်လင့်ပါနှင့်။
၁၇။ အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက ဂျပန်နိုင်ငံတွင်စျေးကြီးပါတယ်။
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရဲ့ ထိရောက်မှုကိုလူသိများသော်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက သင့်အတွက်များစွာကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သာ ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးခရီးသွားရန်စီစဉ်ထားပါက ပြည်ပတွင်ရှိစဉ် လျှော့စျေး JR Pass ကိုသေချာစွာရယူပါ။ (အဲဒီ လျှော့စျေး JR Pass ကိုဂျပန်မှာမရနိုင်ဘူး။ )
၁၈။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်သာတွေဟာ အလွန်မြင့်မားသောနည်းပညာဖြင့်ပြုထားတာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သင်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာပစ္စည်းတွေကြောင့် လူသိများတဲ့နိုင်ငံမှာရှိနေပါပြီဆိုတာ ခံစားမိမှာပါ။
၁၉။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဂျပန်တွင် တစ်နှစ်လျှင် သေနတ်နှင့်ဆက်နွယ်သောသတ်ဖြတ်မှု ၂ မှုရှိပါတယ်။
၂၀။ ဂျပန်မှာရှိတဲ့ လမ်းအများစုမှာ နာမည်မရှိဘူးတဲ့။
ဒါဆို တခြားအချက်တွေရှိရင်လည်း မျှဝေပေးသွားကြဦးနော်။
Hokkaido ‌ဒေသအစားအစာကိုဖော်ညွှန်းနေတဲ့ ချစ်စရာတံဆိပ်ခေါင်းလေးများ !!!!
အမျိုးသားတစ်ဦးခြေထောက်တွင် ထူးဆန်းတဲ့အစက်အပြောက်များထွက်ပေါ်လာ !!!!
1.5 DAYS TINT Waterproof mascara
တီဗွီအစီအစဥ်မှာ ပါဝင်ခွင့်မရတော့တဲ့ ဖျော်ဖြေရေးသမား Egashira
ရည်မှန်းချက်တွေ 100% ပြည့်စုံလာစေမယ့် နည်းလမ်း..!!!